အလုပ် မြန်မာ - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ပစ္စည်းစာရင်းကိုင် အလုပ်အကိုင်များ
အလုပ် 22 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
- System work ႏွင့္ ပက္သက္၍ ေန႕စဥ္ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည္ - System update အတွက် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရမည်။ - Inventory circle count လုပ်ဆောင်မှုများကို ကြီးကြပ်ရမည်။ - ပို့ဆောင်စဉ်အတွင်း receiving supervisor၊ team နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ - Responsible to comply with safety, quality & housekeeping standards - Coordinate with other team members to achieve operation target - Assist Executive in managing required functions
အကျိုးအမြတ်: OT ကြေး ရမည်။
Material Controller ( Store Controller )
အောင်မြင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသော ရလဒ်များ၊ အဓိက စွမ်းဆောင်ရည် ညွှန်းကိန်းများနှင့် အချိန်၏ ခန့်မှန်းခြေ ရာခိုင်နှုန်းများနှင့်အတူ တာဝန်၏ နယ်ပယ်အားလုံးကို စာရင်းပြုစုခြင်း။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းကိုစီမံခန့်ခွဲရန်၊ ပစ္စည်းကိုမှန်ကန်စွာနှင့်လုံလုံခြုံခြုံလက်ခံ၊ စစ်ဆေး၊ သိုလှောင်ခြင်း။ ပေးပို့လာသောပစ္စည်းများကို စစ်ဆေး/စစ်ဆေးခြင်း၊ ပစ္စည်းရောက်ရှိခြင်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် လက်မှတ်အားလုံးကို စုဆောင်းစစ်ဆေးခြင်း။ မည်သည့်ထောက်ပံ့မှုမကိုက်ညီကြောင်းတင်ပြပြီးသက်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းနောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်ခြင်း။ ထုတ်လုပ်သူ၏ညွန်ကြားချက်နှင့်/သို့မဟုတ် MSDS အရပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံကိုသေချာစစ်ဆေးခြင်း။ ဆိုက်ရောက်သည့်ပစ္စည်းများနှင့် သိုလှောင်ရုံတွင် ၎င်းတို့၏ရရှိနိုင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ စာရွက်စာတမ်းများ၏ traceability ကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသေချာရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ Inventory/Delivery/Stock မှတ်တမ်းကို ပုံမှန် အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်း။ Yard မန်နေဂျာနှင့်/သို့မဟုတ် Site Manager ၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပစ္စည်းများကိုအချိန်မီပို့ဆောင်ရန်စီစဉ်ခြင်း။ Yardမန်နေဂျာ/ပရောဂျက်မန်နေဂျာ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ Stock Yardတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကို စီစဉ်ခြင်း။ ပစ္စည်းကို အချိန်မီပေးပို့နိုင်စေရန်အတွက် siteအင်ဂျင်နီယာများနှင့် Traffic Logistic Coordinator တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် bonus ရှိသည်။ သွားလာရေးစရိတ်၊ အချိန်ပိုလုပ်ခရမည်။ တနင်္ဂနွေနှင့် နိုင်ငံတော်အားလပ်ရက်ပိတ်သည်။"
- ဌာနအသီးသီးမှ နေ့စဥ်မှာယူသည့် ပစ္စည်းများအား အချိန်ကိုက်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် ဝယ်ယူဖြည့်တင်းပေးရန် - မှာယူထားသည့် ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာများသို့ အချိန်ကိုက်ပေးပို့ရန် - မိမိဝယ်ယူထားသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ပက်သက်ပြီး ရှင်းတမ်းများအား သတ်မှတ်ရက်အတွင်း အပြီး ဆောင်ရွက်ရန်
Responsible as hands-on leader for leading the in-house warehouse staff as well as outsourced staff Achieve high levels of customer satisfaction through excellence in receiving, identifying, dispatching and assuring quality of goods Maintain the warehouse inaneat, orderly and efficient fashion Maintain items record, documents necessary and prepare required reports Ensure daily operation meets customer KPI & processes Ensure all employees follow safety guidelines of the company.
အကျိုးအမြတ်: Overtime + Monthly Incentive
Teamwork နဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည် နေ့စဉ်နဲ့ အပတ်စဉ် inventory report များကို အချိန်မှီ ပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည် ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်သူ ဖြစ်ရမည်
Research potential vendors Track orders and ensure timely delivery Update internal databases with order details (dates, vendors, quantities, discounts) Conduct market research to identify pricing trends Evaluate offers from vendors and negotiate better prices Prepare cost analyses Maintain updated records of invoices and contracts Follow up with suppliers, as needed, to confirm or change orders Liaise with warehouse staff to ensure all products arrive in good condition
- ထုတ်ကုန်များ၏ မှတ်တမ်းများ၊ store စာရင်းများ၊ Vendor အချက်အလက်များနှင့် Invoices များကို Internal database တွင် သိမ်းဆည်းနိုင်ရမည်။ - Inventory record update နှင့် နေ့စဉ်တင်ပို့မှုများကို မန်နေဂျာထံသို့ တင်ပြနိုင်ရမည်။ - ကုန်ကြမ်းနှင့် packaging ပစ္စည်းများအတွက် သိုလှောင်ရန်နေရာကို စီစဉ်နိုင်ရမည်။ - ထုတ်ကုန်များနှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများအတွက် တင်ပို့မှုများကို စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ - Inventory management နှင့် stock location များကို စုစည်းပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်ရမည်။
- Daily warehouse Layout arrangement - Maintain items record, documents necessary and prepare required reports - Check the daily warehouse assistant report , monthly stock list - Check Packing List and maintenance the inventory management system. - Prepare materials with Delivery Order and fill in bin card - Inform reorder point of materials and handling materials, packing materials
အကျိုးအမြတ်: - Attendance Bonus - Travelling Allowance - Annual Bonus - Uniform
Unicode • ဘွဲ့ရ (သို့) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည် • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ • Construction Materials (Civil & M&E) အကြောင်းနားလည်သူဦးစားပေးမည်။ • Excel ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုတတ်ရမည်။ • Site အသီးသီး၏ ပစ္စည်းစတိုစာရင်းများအား မှန်ကန်မှုရှိစေရန် သေချာစစ်ဆေးပြီးစာရင်းသွင်းနိုင်ရမည် Zawgyi • ဘြဲ႕ရ (သို႔) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္ • သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ (၁) ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။ • Construction Materials (Civil & M&E) အေၾကာင္းနားလည္သူဦးစားေပးမည္။ • Excel ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးျပဳတတ္ရမည္။ • Site အသီးသီး၏ ပစၥည္းစတိုစာရင္းမ်ားအား မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီးစာရင္းသြင္းႏိုင္ရမည္။
အကျိုးအမြတ်: Uniform+ Ferry+ Yearly Bonus+ Other Allowances ရမည်
Fully Happiness Garment Co.,Ltd
- တရုတ်စကားပြော၊ အရေး၊ အကြား၊ အဖတ် ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - English ဘာသာစကား အလယ်အလတ် ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။
Stock Controller & QC
- ဆိုင်ရှိ Stockများကို နေ့စဥ်စာရင်းပိတ်၊စာရင်းဖွင့်ခြ်င်းများ ပြုလုပ်ရမည်။ - ဆိုင်သို့ Stockအသစ်များဝင်ရောက်လာပါကလည်း အသေးစိတ်စာရင်းပြုစုရမည်။ - Customer များဆီမှ order များလက်ခံရရှိပါကလည်း Delivery ပို့ဆောင်ရန် ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ order ထုပ်ပိုးခြင်းများဆောင်ရွက်ရမည်။ - နေ့စဥ် Delivery report များ အထက်လူကြီးထံတင်ပြရမည်။ - အထက်မှပေးအပ်ထားသော တာဝန်များကို အချိန်မှီပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ - လိုအပ်ပါက ဆိုင်တွင် Customer များကို ဈေးရောင်းခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရမည်။
အမျိုးမျိုးသော equipment များ၊ ရုံးသုံးပစ္စည်းများ များထိန်းသိမ်း၍ လက်ခံခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြန်လာခြင်း၊ မတင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်စသောအလုပ်များကို စီစဉ်ခြင်း စတော့များကိုလှည့ ်၍ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ စာရင်းထိန်းချုပ်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်သင့်လျော်သောစတော့ရှယ်ယာများအဆင့်ကိုသေချာစေရန်မှတ်တမ်းများကိုထိန်းသိမ်းခြင်း ကုန်စည်ကိုင်တွယ်မှု၊ စက်ပစ္စည်းများရွေ့လျားခြင်းနှင့်အသေးစားပြုပြင်မှုများကိုညှိနှိုင်းပေးခြင်း မေးလ်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်စာပို့ဝန်ဆောင်မှုကိုကြီးကြပ်ခြင်း လက်အောက်ငယ်သားများအား ရွေးချယ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်းတို့တွင် လိုအပ်သည့်အခါတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း လိုအပ်သောအရာနှင့်ဆက်စပ်သောအရံပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း ဆိုင်ကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ စနစ်တကျထားရှိခြင်း
အကျိုးအမြတ်: ဆွဲဆောင်မှုရှိသောremuneration packageရှိမည် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး လှုံ့ဆော်သည့် အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိမည်
တင်သောနေ့: 16 Nov 2021
* ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပမှ ရောင်းချသူများထံမှ အရင်းအမြစ်၊ ညှိနှိုင်း နှင့် ဝယ်ယူရန် တာဝန်ရှိသည်။ * စံနှုန်းတစ်ခုအပေါ် အခြေခံ၍ ပေးသွင်းသူများ၏ ရွေးချယ်မှုတွင် ပါဝင်ပါသည်။ * ပေးသွင်းသူ၏စျေးနှုန်းအပေါ် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက်ကို ပြုလုပ်ပါ။ * ပေးသွင်းသူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အကဲဖြတ်ပါ။ * လိုအပ်သောရှင်းလင်းရေးစာရွက်စာတမ်းများကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ * ဌာနမှူးမရှိသည့်အခါ ဝယ်ယူရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို မှန်ကန်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေရန် အာမခံပါသည်။ * လိုအပ်သော ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး လုပ်ငန်းအားလုံးကို ဆောင်ရွက်သည်။ * သတ်မှတ်ပေးထားသော ဖောက်သည်အမိန့်များကို မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း သေချာစေပါသည်။ * အမှာစာများ၏အရေအတွက်ကိုအတည်ပြုပါ။ * လိုအပ်သောအမိန့်စာသည် သဘောတူထားသည့်ဘတ်ဂျက်အတွင်းရှိနေကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
- လက်ခံရရှိသော ပစ္စည်းအားလုံး အရေအတွက်၊ အရည်အသွေးနှင့် မှန်ကန်သော စျေးနှုန်းဖြင့် မှန်ကန်ကြောင်း သေချာစစ်ဆေးခြင်း။ - ပစ္စည်းအားလုံးကို လက်ခံရရှိသောအခါတွင် မှန်ကန်အောင် သေချာချိန်တွယ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ငွေတောင်းခံလွှာကို မူရင်းဝယ်ယူမှုတောင်းခံလွှာပုံစံနှင့် နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးခြင်း။ - ရရှိလာသော ပစ္စည်းအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ လက်မှတ်ဖြင့် သင့်လျော်သော ဝယ်ယူမှု order formများကို ပူးတွဲတင်ပြခြင်း။ - ဝယ်ယူသည့်ရုံးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ အကြောင်းကြားပြီး မမှန်သောပစ္စည်းများကို ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း။ - ရရှိလာသော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင့်လျော်သောနေရာများတွင် စုစည်း သိမ်းဆည်းရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို အချိန်မီ စုဆောင်းရန် သက်ဆိုင်ရာသို့ တောင်းဆိုခြင်း။ - နှောင့်နှေးမှုများ သို့မဟုတ် ပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်၍ ဝယ်ယူသည့်အပိုင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း။ - အမှာစာများနှင့် ပေးပို့မှုအသေးစိတ်များ စသည်တို့၏ update မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။ - နေ့စဥ် နောက်ဆုံးထားပြီး ရရှိလာသောစာရင်းများကို update လုပ်ကာ ကုန်ကျစရိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် ဌာနအကြီးအကဲထံ တင်ပြခြင်း။ - လကုန်တွင် စတော့ခ်ယူခြင်းအတွက် cost controllerနှင့် အလုပ်တွဲလုပ်ခြင်း။ - store keeperအား ပုံမှန် follow up လုပ်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းမှုများနှင့် ပြဿနာများကို ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် လကုန်တွင် လစဉ် Store report ကို update လုပ်ခြင်း။ - တစ်ခါတစ်ရံတွင် Jasmine Ngapali Resort အတွက် ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံရရှိရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: Uniform, Duty Meal, Service Charges
Shopping Center များတွင် ပစ္စည်းအ၀င်အထွက်များကို Bercode Scanner ဖတ်သည့် အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ Bercode များကို Scanner ဖတ်၍နေ့စဉ်ကုန်၀င်ကုန်ထွက်စာရင်းများကို Computer Excel ဖြင့်စာရင်းသွင်းနိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Overtime allowance
Good Issue Staff
-ရောက်ရှိလာသည့် Electronic ပစ္စည်းများကို စေ့စပ်သေချာစွာ စစ်ဆေးပြီး လက်ခံရမည်။ -စစ်ဆေးလက်ခံပြီးသော ပစ္စည်းများကို distributor များထံသို့ Packing list နှင့် တိုက်စစ်၍ ပစ္စည်းထုတ်ပေးရမည်။ -လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော training ပေးမည်။ -လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော Report ကို အထက်မန်နေဂျာ သို့ စေ့စပ်သေချာစွာ ပို့ရမည်။ -လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်သည်။
🔹Warehouse အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းများ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တို့ကို ကြီးကြပ်ခြင်း။ 🔹Warehouse လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် မှတ်တမ်းများကို တိကျသေချာမှုရှိစေရန် စစ်ဆေးခြင်း။ 🔹 Warehouse အတွင်းရှိ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းများ Up to Date ဖြစ်စေရန် စစ်ဆေးကြီးကြပ်ခြင်း။ 🔹လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ်များနှင့် စက်ကိရိယာများကို ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများ၊ ထိန်းသိမ်းမှုများရှိစေရန် ကြီးကြပ်ခြင်း။ 🔹သတ်မှတ်ထားသော Budget အတွင်း Manpower များကို စစ်ဆေးရေးဆွဲ စီမံခြင်း။ 🔹လုပ်ငန်းစဥ်နှင့် ပတ်သတ်သော Daily Report နှင့် Monthly Report များကို အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာ တင်ပြခြင်း။